रवि ओड नेपाल आइडलको ‘टप ८’ मा पुग्न सफल - Everest Dainik - News from Nepal
रवि ओड नेपाल आइडलको ‘टप ८’ मा पुग्न सफल
काठमाडौं, कार्तिक १६ । एपी वान एचडीबाट प्रसारण भइरहेको ‘नेपाल आइडल सिजन-२’ मा सुदूरपश्चिमबाट सहभागी भएका रवि ओड ‘टप ८’ मा पुग्न सफल भएका छन् । दर्शकको भोटका आधारमा उनी ‘टप ८’ मा पुग्न सफल भएका हुन् । आज आउट भएकी छन् ।
याे पनि पढ्नुस ४ वर्षअघि रविले गाएको गीत ! [भिडियाेसहित]
नेपाल आइडलमा सुदूरपश्चिमबाट एक मात्र प्रतिस्पर्धी रहेका रवि वडलाई कसरी गर्ने भोट ? यो प्रश्नको जवाफबारे धेरैलाई थाह नहोला । त्यसकारण हामी जानकारी गराउँदै छौं । रबिलाई भोट दिन मोबाइलको Message Box मा गएर १० टाईप गरी ३१००९ मा पठाउनुपर्ने हुन्छ ।
याे पनि पढ्नुस रवि ओडलाई हराउन यस्तोसम्म हर्कत !
भोटिङ बिहीबार राति ८ः३० बजेबाट खुल्ला हुने छ र शुक्रबार बिहान १२ बजेसम्म गर्न सकिने छ। विदेशमा बस्नेहरुले Rise and respect app डाउनलोड गरी उनको कोडमा गई भोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।
ट्याग्स: Ravi oad #Nepal Idol